Man United oo iska lumisay furad ay kula soo saxiixan kartay Thiago Alcantara, iyagoo bedelkiisa la soo wareegay Marouane Fellaini! – Gool FM
(Manchester) 05 Seb 2020. Manchester United ayaa iska lumisay fursad ay kula soo saxiixan kartay Thiago Alcantara , waxaana la sheegayaa inay xitaa si aad ah ugu dhowaadeen sanadkii 2013-kii, laakiin macallin David Moyes oo markaas kooxda ku cusbaa ayaa la soo saxiixday Marouane Fellaini.
Moyes ayaa qabtay xilka tababarenimo ee Man United todobo sano ka hor, kaddib markii Sir Alex Ferguson uu shaqada ka fadhiistay 26 sano oo guulo ah oo uu joogay kooxdaas.
Sida laga soo xigtay Shabakadda ESPN, Ferguson mar hore ayuu heshiis la galay Thiago – kaddibna Barcelona – laakiin Moyes ayaa lagu soo warramayaa inuu jihada ka saaray sababtoo ah ma uusan aqoonin wax ku filan oo ku saabsan xiddigan khadka dhexe ee Isbaanishka ah, waxaana uu Fellaini ka iibsaday kooxdiisii hore ee Everton.
Moyes, oo saxiixay qandaraas lix sano ah xitaa ma uusan sii joogin kooxda ugu yaraan xilli ciyaareed markii la ceyriyay bishii April sanadkii 2014.
Thiago ayaa ku biiray Bayern Munich waxaana tan iyo markaas uu ku guuleystay 7 horyaalka Bundesliga ah iyo todobaadyo yar ka hor oo uu kula guuleystay tartanka Champions League.
29-sano jirkaan ayaa kaliya hal sano uga hartay qandaraaskiisa Kooxda Bayern Munich, inkastoo Man United ay markale xiiseyneyso, haddana Thiago ayaa si aad ah loola xiriirinayaa xagaagan inuu u dhaqaaqayo kooxda haysata horyaalka Premier League ee Liverpool.
Fellaini waxa uu waayihiisii guulaha ku soo qaatay garoonka Old Trafford, isagoo kula guuleystay Man United, FA Cup, League Cup iyo Europa League ka hor inta uusan aadin kooxda Shandong Luneng sanadkii 2019.